Wararka - Fiidiyowga kujira Buug-yaraha - Aaladda cajiibka ah ee Suuqgeynta Degdegga ah Ma waxaad raadineysaa qalab suuqgeyn ku habboon oo isku dhafan fiidiyow iyo daabac si aad ganacsigaaga si deg deg ah ugu suuq geyso?
Fiidiyowga kujira Buug-yaraha - Qalabka Cajaa'ibka leh ee Suuqgeynta Degdegga ah Ma waxaad raadineysaa aalad suuqgeyn ku habboon oo isku dhafan fiidiyow iyo daabac si aad ganacsigaaga si deg deg ah ugu suuq geyso
Buug-yaraha fiidiyowgu wuxuu kaa caawin doonaa inaad ku hirgeliso qorshaha noocan oo kale ah hab wax ku ool ah. Waxay ka dhigaysaa sharaxaad kooban oo sax ah ee alaabtaada, adeeggaaga, ama shirkaddaada laba dhinac - fiidiyow iyo daabac. Daabacaadda waraaqda caadiga ah ayaa caajis ka dhigi doonta dhiirrigelintaada, ama xitaa ka dhigi karta qaybta 'joornaalka xayeysiinta'. Ka dhigista xayeysiinta fikrad horay loo soo qaatay waxay u horseedi kartaa fikradaha xun ee astaantaada.
Hore-u-soo-saar loogu talagalay fiidiyowga ganacsiga wanaagsan
1. Booqo youtube-ka oo ka raadi ereyada muhiimka ah ee warshadahaaga waxoogaa dhiirigelin ah ama caddayn ah oo ku saabsan sida loo abuuro filimka ugu fiican warshadahaaga.
2. Liis garee meheradaha aad ku liidato iyo / ama tiirarka astaanta ah oo aad cadeyso waxa faa iidooyinka ah ee aad siiso macaamilka iyo sida aad ugu kala duwan tahay tartankaaga.
3. Ka fikir waxa muuqaal ahaan ama dadku sida ugu fiican u sheegi karaan sheekadaada. Ma adiga mise macaamiishaada ama alaab-qeybiyeyaasha? Isweydii, sideen ugu soo bandhigi karaa sheekadeenna qaab feyl ah?
4. Kireyso soo saare filim ama agaasime filim leh folio weyn oo shaqo ah kaasoo kuu sheegi kara natiijooyinka filimadooda ay abuureen. Waxaad ka heli doontaa wakaalado heer sare ah oo abuuri kara masraxyo filimo ama ardayda filimada bilaabaya miisaaniyadooduna si aad ah ayey u kala duwanaan doontaa. Filim sameynta waa farsamo ay qaadato waqti dheer iyo dadaal si aad u hanato, marka hubi inaad shaqaaleyso dadka aqoonta u leh xirfadooda, maxaa yeelay waxay kaa dhigayaan qof wanaagsan. In kasta oo ay jiraan shirkado si guul leh uga sameeya waxyaabaha ceyriinka ah iPhones, haddana waxay u badan tahay inay dhisteen sinnaan sumadeed ka hor intaan la wadaagin waxyaabaha cayriin.
5. Maskaxda kula fikir filim sameeyayaasha qaabka ugu fiican ee aad sheekadaada uga sheekeyn karto. Ma sheeko-sheeko-muuqaal-yar-muuqaal ah, qaab dukumiinti, vox pop, guriga farshaxanka ama markhaatiyo taxane ah? Dhammaan filimada waaweyn waxay ku lug leeyihiin diyaargarow wanaagsan.
6. Cadee sida aad u rabto daawadaha inuu daawado ka dib daawashada filimkaaga iyo haddii ay jirto wicitaan ficil ah? Go'aami halka filimkaaga lagu qaybin doono - youtube, bogga shirkadda, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter - maadaama ay taasi saameyn ku yeelan karto sida aad u duubeyso sheekadaada?
7. Ka soo qeybgal duubista filimka si aad u hubiso in filimku farriin ku socdo iyo sida saxda ah ee aad maskaxda ku haysay maxaa yeelay waxaad ka aqoon badan tahay astaantaada qof kasta.
8. Wax ka weydii tafaftiraha filimka maadaama wax ka beddelka kaliya la fududeeyo marka qorshe wanaagsan iyo duubista la dhammaystiro. Hubso in qandaraaska uu sheegayo inaad sameyn kartid wax ka beddelka noocyada la dhammaystiray.